Hooyo iyo canugeeda - Qiso jaceyl oo xanuun badan - Cishqi
Hooyo meaning, Qof walbaa oo Somali ah markii magaca hooyo la soo hadal qaado, durbaba wuxuu oran hooyo waa lama huraan, hooyo waan ku jeclahay.
Hooyo iyo Wiilkeeda
Markaad maqasho erayga hooyo, waxaa dareemeysaa naxariis iyo jaceyl. Waxaad soo xusuusaneysaa qiimaha ay hooyonimadu leedahay. Qof walbaa oo Somali ah markii la weydiiyo, aabe iyo hooyo keebaad jeceshahay? durbaba isigoonan ka sii fikirin wuxuu ku oran hooyo.
Ma taqaanaa Sababta? Sababtoo ah ma jiraan ma jiraan wax hooyo ka qiimo badan. Haddii ay hooyo kuu nooshahay ku dadaal inaad ka duceysato. Maxaa yeelay waxaa jiro dad badan oo aanan hooyo heysanin.
Qisadani waa qiso jaceyl oo xanuun badan misana u dhexeeyso hooyo iyo wiilkeeda. Markaad akhriso qisadani waxaa fiican inaad hooyo mar walbaa farxadgelisid, aad u noqoto baari, adeecdo hadalkeeda. Qiimaha hooyonimo dad badan ma dareensano marka laga reebo dadka qaar. Waxaad si sax ah u dareemeysaa qiimaheeda markaad weyso hooyo arageeda.
Xasuus markaad yareyd sida ay hooyo kaaga fikir jirtay iyo sida ay u jecleyd in ay adiga wax walbaa kuu sameyso. Waxay caloosha kugu siday sagaal bilood oo laga yaabo in ay aad ugu dhibtooday dhalidaadii. Si kastaba ha noqotee qiimaha hooyo iyo abaalkeeda ma ahan mid aan halkaan ku soo koobi karno.
Hadaba aan uguda galno qisadani cajiibka ah iyo sida ay u dhacday.
Hooyo macaan iyo wiilkeeda yar
Jaceylka Hooyadu leedahay
Waxaan ku soo koray tuulo yar oo ku taallay dooxada weyn ee Septies. Waxaanu ahayn beeraley noloshuna waa ay noo wanaagsanayd.
Waqtigaygan caruurnimadu wuxuu ahaa mid igu maasheeyey farxad iyo kalgacal dheeriya oo aan Hooyo ka heli jiray maadaama oo ay aniga keligay i dhashay, waxay ku dedaali jirtay inay i siiso wax kasta oo i farxad gelinaya isla markaana aanan dareemin agoonnimadayda.
Waxaan Hooyo dhawr jeer ka codsaday in aanay iigu iman iskuulka maadaama oo ay lahayd Il keliya anna aan ka cabsoonayey in saaxiibaday ogaadaan in Hooyaday Il keliya leedahay kadibna ay igu dacaayadeeyaan.
Maalin maalmaha ka mida waxaan ku war helay hooyo oo daba socota macalinkaygii xisaabta isla markaana soo gashay galaaska si ay ii aragto. Ardaydii oo dhan ayaa hal mar wada jaleecay kadibna qosol kaga taagay, balse hooyo waxay ku dhawaaqday magacayga iyada oo leh “Hooyo, i soo yar bax”. Cadho darteed waan kici kari waayey, waxaanan dareemay ceeb weyn oo ay saaxiibaday igu dacaayadayn doonaan.
Waan ku soo jeestay annoo aad u qaylinaya kuna leh “hooyo miyaanan kun jeer ku odhan ha iigu iman iskuulkayga, bal sidaan wax ula sii dhigan doonaa ardaydii saaka oo dhan ku qoslaysay ishaadan gorofka ah, waad i ceebaysay waanad ii bah dishay cidkasta maanta, ma doonayo in aan dib kuu arko ee iga hor dhaqaaq anna waxan ballan kuugu qaadayaa in aan ka dheeraado meel aad joogto” kadibna waan dhaqaaqay.
Waxaan la degay saaxiibkay waxanan go’aan ku gaadhay inaan ka tago magaaladan iyo iskuulkaba. Isla maalmihiiba waxaan waxbarasho bilaash ah ka helay waddanka Singapore oo aan ku dhamaystay iskuulkii iyo jaamacadiiba. Halkaasaan shaqo ka bilaabay isla markaana ku guursaday oo noloshaydii ku qaatay aniga oo aan mar qudha dib ula xidhiidhin Hooyo iyo tuuladaan ku soo koray toona.
Goor galab ah abaaro 5:30pm aniga oo ka imi shaqadii isla markaana fadhiya beerta gurigayga daawanayana caruurtayda oo ku ciyaaraysa daarada ayaa la soo garaacay albaabkii guriga waxa ka furay wiilkayga curad oo 8 jir ah balse isaga oo qaylinaya ayuu dib u soo cararay.
Dhamaan caruurtii waxay isku dartay oohin iyo qaylo aad u dheer oo cabsi badani ka muuqato, si degdega ayaan u kacay waxana arkay hooyo oo aad u gabowday, dayac iyo diif badanina ka muuqato oo taagan albaabka, aad baan u xanaaqay waxan ku idhi: “Sowtaan ku idhi aragayga waan kaa dheeraynayaa ee i daa, sidaad u awoodday in aad gurigayga timaaddo oo aad carruurtayda cabsi geliso? ii dhaaf gurigayga noloshaydana ii daa waan ku baryayaaye”. Hooyo way oyday wayna dhaqaaqday.
10 sanadood kadib waxan booqday tuuladii aan kusoo koray si aan uga war doono xaalada ay ku nooshahay Hooyaday, waxaana tegay gurigayagii oo cidla ah isla markaana aan wax dhaqdhaaq ah lahayn. Waxaan waydiiyey jaarkii inay arkeen Hooyo waxayna ii sheegeen inay geeriyootay 9 sannadood ka hor ayna iigu dhiibtay waraaqdan. Runtii waan naxay waxaanan furay waraaqdii.waxa ku qoran hadal sidan u dhigan:
Wiilkaygiiyow, waxan doonayaa inaan kuu sheego qiso aanan hore kuula wadaagin, markii aad yarayd adoo maalin ku ciyaaraya waddada agteeda ayaad gashay shil aad u khatar badnaa oo sababay in aan aniga laftaydu koomo u galo dartaa.
Nasiib wanaag waad ka badbaaday geeri balse waxad weyday ishaadii bidix oo xalku noqday in lagaa saaro oo keliya. Arintaasi waxay igu dhalisay werwer badan waxanan murugooday in badan ugu dambayn waxan go’aan ku gaadhay in aanad korrin adiga oo leh il keliya kadibna waxan kuu saaray ishaydii bidix, si aanad uga duwanaan caruurta qayrkaa ah aniguna waxaan doortay in aan Il la’aado adiga dartaa.
Waan ka murugoonayaa in aynu nolosha ku kala fogaanay balse waxaan rajaynayaa in aynu aakhiro dib u midowno
Qalinka: Mursal Adale